I-Apple iyaqhubeka nokusebenza kwintlonipho yokusingqongileyo | Ndisuka mac
Inye into abalandeli beemveliso zeApple esele beyazi kukuba ukuthenga enye yeemveliso zabo ayizukuxela imveliso eneempawu ezintle kuphela nesonwaba ngazo ixesha elide, kodwa kwangaxeshanye siya kube senza igalelo ekuhlonipheni indalo. Ku Ndivela eMac Andiqali ukuthetha ngale nto, kwaye ukuba yonke imihla edlula iApple ithatha amanyathelo amatsha malunga noku.
Ayifani nokuthenga imveliso yeApple kunento elingana nelinye uphawu kwaye yilezo zivela eCupertino zijikeleza kakuhle kakhulu malunga nezinto zokwakha isixhobo, iindlela zokwenza Kwaye nokuphuculwa kwephakeji enokuthi kwiimeko ezininzi ibe yinto yokuqala erisayikilishekiyo.
Kangangexesha elithile, uApple usixelele ukuba benze iirobhothi ezibizwa ngokuba yi-LIAM ezinoxanduva lokusika, okwangoku, i-iPhone ukuze iphinde ifumane uninzi lwezixhobo ezenziwe ngazo. Njengoko usazi, kwiwebhusayithi ka-Apple kukho icandelo elizinikele ekusebenziseni iimveliso zalo kunye nokucacisa wenzeni ukuze ubenakho ukubathumela okanye ukubasa ukuba ziphinde zisetyenziswe ukuba ufuna ukuzilahla.
Nangona kunjalo, kweli nqaku asifuni ukuthetha ngaloo nto kodwa malunga nokuzibophelela ukuba iApple iyaqhubeka nokwenza ukupakishwa kweemveliso zayo kuya kusanda kubola. Ukuba uqaphele, kokubini ekupakisheni i-iPhone okanye i-iPad kunye neMacBook okanye iMacBook Pro, ubukho bephepha buyanda. Abekho abakhuseli beplastiki ishaja esongelwe kuyo ukuze ibengezele kwaye ikhazimle xa siqala ukuyikhupha ngaphandle kwebhokisi. Ngubani ongalibonanga iphepha elicekeceke eliza kwiscreen seelaptops zeApple? Ngaphambili, olu khuselo lwalusenziwa ngento efanayo kodwa iyatyeba kakhulu kwaye inokwakheka okuphezulu kakhulu kweselulosi.
Ukuba sihlalutya ukupakishwa kwe-iPhone sibona ukuba kule minyaka idlulileyo iplastiki ekhoyo kuye yehle kakhulu kwaye ngoku kukufakwa kwee-EarPods ezifakiwe kuyo. yenziwe ngekhadibhodi hayi ngeplastiki. Kwi-iPhone yokugqibela, iitshaja ziye zaqala ukufakwa ngephepha hayi ngeplastiki, isenzo esiya kuthi ngokuthe ngcembe sisasaze kwezinye iimveliso.
Iapile ijikeleza intle kangangokuba bade babe nolawulo lwamasimi emithi enzelwe le njongo ukwenzela ukulinganisa ifuthe kwindalo eliyivelisayo. Khumbula ukuba iApple icace gca ukuba yinkampani enobungakanani bayo kufuneka ibeke phambili imigaqo-nkqubo yokusingqongileyo kuba kungenjalo iya kutshabalala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » I-Apple iyaqhubeka nokusebenza kwintlonipho yokusingqongileyo
Yima ngemagneti kunye nokuma okumangalisayo kwi-Apple Watch yakho